Qabeentota Kuusaa faayaa akka sajoowwan yookin mata direewwan sajoowwan waliiniifi odeeffannoo xurree agarsiisuu ni dandeessa.
Wanta baaqqee Kuusaa faayaa keesaa irratti faaraan guddisuu yookiin faaran xiqqeessuuf, wanticha lama cuqaasi, yookiin wanticha fili, ittaansuudhaan kabala iddoolaa dhiibi.
faayilii Haaraa kuusaa faayaatti Ida'uu
Faayilii gara Faayaa tti ida'uuf, dhaamsa mirga cuqaasi, Amaloota fili, caancala Faayilootaa cufaasi, ittaansaadhaan Ida'i cuqaasi. Dabalataanis, wanta galmee ammee keessa cuqaasi, qabi, ittaansuudhaan gara foddaa kuusaa faayaa tti harkisi.
Ajajawwan armaan gadii dhiheessuf, dhaamsa kuusaa Kuusaa faayaa keessatti mirga cuqaasi:
Wanti baattuu deetaa irraa qaamaan haqameera yookaan halqara irratti hundaa'uun agarsiisni wantaa haqameera.
Kuusfaayaa keessa yeroo jirutti Haqi yoo filatte, galfatni kuusfaayaa keessaa haqama, garuu faayilichi mataansaa osoo hin tuqamiin tura.
Wanta filatame maqaa jijjiiruuf dandeessisi. Filannoon booda Maqaa Jijjiiri maqichii filame wanti haaraa kallchaan galfamuu danda'a. Qaree jalqaba ykn dhuma maqaa irratti qindeessuun haquuf yookaan gara qaama maqichaatti ida'uuf yookaan qaree bakka biraa qubachiisuuf furtuulee xiyyaa fayyadami.
Mul'annoo foddaa keessaa yookaan wanta filatame keessatti haroomsa.
Qaaqni Amaloota (Dhamsaa) caancalawwan armaan gadii qabata:
Baafata xiqqaa Kuusfaayaa keessatti bana iddoo ati itti Gargalchi fi Geessituu keessaa filattutti jechuu dha. Wanti kuusfaayaa filatame gara galmee ammeetti gargalchama yookaan geessituun ni uumama.
Yoo galmee kee keessaa wanta filatteetta ta'e, saagamni haaraan wanta filatame bakka bu'a.
Maalimaan filatame Kuusfaayaa keessatti hammamtaa guddaadhaan mul'ifama. Gara mul'annoo kuusfaayaa baratameetti deebisuuf durargii lama cuqaasi.
Title is: Kuusaa faayaa